China Cutcha ute maka Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Matcha Matcha maka Cricut Joy Onye Mere Emeputa na Factory | Allwin
Cha ute maka Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Ntucha forcha maka Cricut Joy Onye kere
• Na-arụ ọrụ zuru oke maka Cricut Explore Ikuku 2 kacha Mee N'onwe Gị electronic ọnwụ ngwá ọrụ igwe.
• A na-ahazi ihe mgbochi ihe nfe siri ike maka ihe dị arọ, ihe a na-atụ aro maka nnukwu kaadị, ihe na-egbuke egbuke, ihe magnet, bọọdụ akwụkwọ mmado, akwa na stiffener.
• Nnọchi cuttingcha ute na-mere nke adịchaghị mma ịkwanyere, nrapado tacky matcha ute na 12 24 (inch)
• Debe ihe nkpuchi ihe nkiri doro anya na ihe ndị a na-egbu ihe na Silhouette mgbe ị na-echekwa ka ị na-egbutu ihe mgbochi na-enweghị ntụ na ájá. Jiri scraper ka kpochapu oke iberibe na spatula iji jiri nlezianya wepu ihe oyiyi bee.
• Mats ndị a nwere naanị ọkwa ziri ezi iji jide ihe gị n'ụzọ siri ike n'oge ma kwe ka iwepụ ihe dị mfe. Cha akwa dị mma maka ndị ọrụ nka, quilters, ụmụ akwụkwọ nka na ihe omume ntụrụndụ ịme ọtụtụ Mee N'onwe Gị.
Product akụkụ (Full size) 330x660 mm
Size (Obibi nha) 12 x 24 INCH
Ekike nke igwe Maka Cricut Nyochaa Ikuku 2
Agba nkịtị Uzo / acha anụnụ anụnụ / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / acha odo odo / pink / odo
Agba Ahaziri agba nabatara
Akara A nabatara mbipụta akara ngosi gị
Oge nlele Emekarị 1 ~ 3 ụbọchị ọrụ
Gwọ nlele Samplegwọ nlele ahụ ga-adabere na akara ngosi iji kwụọ ụgwọ
Uzo na-acha / StandardGrip
Agba agba / LightGrip
Agba agba / StandardGrip
Acha clor / StrongGrip
ka nwere agba odo na agba pink / oroma
Rich OEM na imewe ahụmahụ maka ọtụtụ mba ụdị.
Iche iche bụ nnọọ zuru ezu mmepụta-ụdị factory.
Production High Production nke ọkachamara factory maka afọ 20.
● Ezi mma, ezigbo ọnụahịa, asọmpi ahịa siri ike.
Gest Nnukwu uru: Emepụtara akpaghị aka, ụgwọ dị ala.
China na mba a maara nke ọma ika OEM suppliers.
OEM price ga kpọtụrụ anyị, price bụ nke ọma kwesịrị-atụ anya.
● Pụrụ iche size, nwere ike ahaziri
Anyị mepụtara akwa ute maka afọ 15! Mailand nke China na-emepụta ụlọ ọrụ ihe ubi na-egbu ihe.
Agbakwunyere ọnwụ ute, ihe onwunwe ọkpụrụkpụ 0.5mm. Ihe a bụ PVC. Nkwụsi ike nwere ụdị abụọ: nnyapade dị elu na nkenke na mkpokọta. Anyị nwekwara nha ndị ọzọ: 12 "x 12", 12 "X 8", 12 "x 6", 4.5 "x 12", 4.5 "x 6.5" inch.
Nke gara aga: Cha ute maka Cricut, 9912, 12 ″ x12 ″ Cutting ute maka Cricut Onye kere
Osote: 5 oyi akwa A0 Matcha ute, 661A0, Self-agwọ Cutcha ute
Cha ute maka Silhouette, 8824, 12 ″ x24 & ...
Cha ute maka Silhouette, 8812, 12 ″ x12 & ...
3 n'ígwé A2 Matcha ute, 883A2, Self agwọ Cu ...
3 n'ígwé A4 Matcha ute, 883A4, Self agwọ Cu ...
5 n'ígwé A2 Matcha ute, 661A2, Self agwọ Cu ...